AeroLeads: Chọpụta Anya Adreesị Email na Ntanetị Chrome a | Martech Zone
Na agbanyeghị etu netwọkụ gị buru ibu, o yiri ka ọ nweghị mgbe ị nwere ezigbo kọntaktị. Karịsịa mgbe gị na nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ. Ebe nchekwa data akpọtụrụ na-adịkarị nke oge - ọkachasị ebe ọ bụ na azụmaahịa nwere nnukwu ndị ọrụ ntụgharị.
Ikike inyocha ozi kọntaktị n’oge na-esite na isi mmalite siri ike dị mkpa maka mbọ ị na-agba n’ọdịnihu. Aeroleads bụ ọrụ na ihe mgbakwunye Chrome na-eso ya nke na-enyere ndị ahịa gị aka ịme nke ahụ.
AeroLeads na-enye ndị na-ere ahịa ọpụpụ aka ịchọ kọntaktị site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ site na ngwa mgbakwunye Chrome ha - jidere ozi kọntaktị ha nke dị na nchekwa data ha ma metụtara profaịlụ mmekọrịta ị na-ele.
Itinye n'ọrụ Aeroleads Chrome Extension dị mfe:
wụnye Mgbatị Chrome, rụọ ọrụ ya, ma chọọ na AeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, wdg.
Họrọ olile anya dị mkpa ma nyefee ha na AeroLeads n'ime listi atụmanya.
AeroLeads ga - enweta nkọwa niile banyere azụmaahịa ma ọ bụ onye ahụ gụnyere Email, Aha, Nọmba Ekwenti, yana profaịlụ mmekọrịta.
Nwere ike izipu listi ahụ na CRM nke mpụga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị wuo ndepụta atụmanya n'ebe ahụ. A na-enye ozi kọntaktị na ihe dịka $ 0.50 kwa ndekọ. You nwere ike nwalee ngwa mgbakwunye na 10 akwụmụgwọ n'efu.
Njikọ Aeroleads na-eduga
Aeroleads emeela njikọta ọnụ iji mee ka ozi kọntaktị ahụ banye na akaụntụ gị ma ọ bụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, gụnyere Mailchimp, Salesforce, Insightly, Pipedrive, Zapier, Zoho, Hubspot, na FreshSales.
Ngosipụta: Anyị abanyela na ya AeroLeads ma na-eji njikọ njikọta anyị na bọtịnụ dị n'elu.
Tags: aeroleadsAPIzụta data kọntaktịzụta ndekọ ihe atụmanyachrome ndọtịchrome ngwa mgbakwunyekọntaktị na ndepụtachọta ozi kọntaktịFreshsalesnweta ozi kọntaktịokpokoroNghọtandepụta apimailchimpọpụpụNa-agba ọsọndepụta olile anyandị ahịaikeZoho